သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ဖတ်မိတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်
ဟိုတနေ့က ၀ယ်လာဖြစ်တဲ့ (ဆရာ)အံ့မောင်ရဲ့ စိန်ပွင့် မြပွင့် ပတ္တမြားပွင့် ကဗျာများ စာအုပ်ထဲက ကဗျာလေးတွေကို ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်..။
အဲဒီ့ သဘောကျမိတဲ့ ကဗျာလေးတွေထဲက တပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ဆားချက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်.. :D ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက သားငယ် ရေကျောက်ဆက်ပေါက်နေတာရယ်.. သူတို့ စာမေးပွဲတွေ ဆက်နေတာရယ်.. ကျမလည်း ဒီလောက် ပူလောင်တဲ့ နေပူကျဲတဲထဲ မထွက်ချင်ပဲ တချိန်လုံးအပြင်မှာ ရှိနေခဲ့တာရယ်ကြောင့် ဘလော့ဂ်ကို အချိန်မပေးနိုင်ြ ဖစ်သွားရပါတယ်... ကိုယ့် ဆီမှာ မတင်နိုင်ပေမယ့် မိတ်ဆွေတွေဆီတော့ အပြေးအလွှားသွား ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. တချို့လည်း ကော်မန့်ရေးလို့မရ.. စီဘောက်စ်ထဲမှာလည်း ချန်ထားခဲ့လို့ မရလို့ ပျောက်သလို ဖြစ်နေခဲ့ရတာပါ...။
you have had your bite.
you have had your shot.
whatarare man you are!
Your offer to serve Thuwunnathama's parents
Oh, Pa, Mom and Goddess!
You've all done your duty
making sacred vows.
Now please raise the curtain for the finale
Where the blind old parents will see their comatose son
come carryingapot of gold.
[finale = fi'na:li]
မင်းကတော့ ရှာမှ ရှား
ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ်ယူ
ကဲ သားရွှေအိုးထမ်း လာတာ
Posted by tg.nwai at 12:02:00 PM
Lables, ကဗျာ၊ (မြန်မာ)
မမtg တို့ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကြည့်ရမှာ မဟုတ်လား
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကားလိပ် အဆွဲကို ရင်မောအောင် စောင့်နေရပါလိမ့်???
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလို့ နေမယ်...
မသိင်္ဂီရေ စိတ်တွေရှုပ်နေလို့ပါ... သတိရတယ်။
မtg ရေ .. ဒီစာလေးတွေက ညီမနဲ့ အထိအတွေ့မရှိပါဘူး ..
တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါး)